दैलेखमा घरको विहे यसरि गरिन्छ : RajdhaniDaily.com
Home Editor-Picks दैलेखमा घरको विहे यसरि गरिन्छ
दैलेख । केही दिन अगाडी दैलेखको ठाटिकाँध गाउँपालिका –१ मा घरको विहे हेर्ने मौका जु¥यो । मानिसको विहे जस्तै घरको विहे हुँदो रहेछ, त्यहाँको संस्कारमा । दुना टप्परी,ब्राहम्मण र घरका सबै सदस्यले आँगनमा राखिएको मण्डललाई आजापुजा गर्नुपर्ने । आफन्तलाई निम्तो, घरको वरिपरि धागोमा आँप र पिपलको पात घरको विचमा सिउँडी राख्ने चलन रहेछ । घर अगाडिको भागमा आँगनदेखी धुरीसम्म सेतो कपडा मुनि घर मालिक र मालिक्नी ।
घरको धुरीबाट लोटाले घर बनाउने मिस्त्रीले पानी खन्याएर श्रीमान र श्रीमतिलाई नुहाएर घर शुद्ध गर्ने परम्परा रहेछ । घरको वरिपरि सेतो कमेरो, रातो माटोले पोतेको ठाउँमा बोकाको बलि दिनु पर्ने । भोज भतेर लगायत विवाहको जस्तै थियो, घरको विहे । जसलाई स्थानीय भाषामा (पछेटा) भनिदो रहेछ । पछेटा नभएको घरमा रातो माटो र कमेरो लगाउने त्यहाँको संस्कारमा बन्देज छ ।
उदयपुरमा पाँच दिन ५ वटा बलात्कारका घटना
उदयपुर । उदयपुरमा पाँच दिनमा पाँचवटा बलात्कारको घटना घटेको छ । जिल्लाका बिभिन्न स्थानमा गरि ३ वटा बलात्कारको घटना र २ वटा बलात्कारको प्रयास...
बालुवाटार प्रकरणदेखी सेक्युरिटी प्रेश घोटालामा संलग्नलाई कार्वाही माग गर्दै प्रदर्शन
काठमाडौं । बिभिन्न घोटालाका मूल दोषीहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले आइतवार दिउसो माइतिघरमा प्रदर्शन गरेको छ । संसदमा प्रस्तुत बिधेयकहरुमा...
प्रमुख Dhruba Lamsal - December 13, 2020 0
भर्खरै Kumar Raut - July 27, 2020 0
खुकुरी प्रहार गरी फरार रहेका लामा र गुरुङ पक्राउ
तनहुँ । जिल्लास्थित शुक्ला गण्डकी नगरपालिकाका दुई युवालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँको बेलचौताराले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा शुक्लागण्डकी नगरपालिका-४ बस्ने रविलामा र...
Breaking News ओपेन्द्र बस्नेत - April 2, 2021 0
ट्याक्टर दुर्घटना अपडेट : मृतकको पहिचान खुल्यो
झिमरुक । प्युठानमा ट्र्याक्टर दुर्घटना हुँदा मुत्यु भएका सात जनाको पहिचान खुलेको छ । भिग्री–स्वर्गद्वारी सडकखण्डमा काम गर्ने रोल्पा रुन्टिगढी गाउँपालिका–५ बाइजाका २१ वर्षीय...
Breaking News Sushila Bishwokarma - December 30, 2020 0